Ganacsatada Islii oo soo dhaweeyay tallaabo ay qaaday dowladda Kenya
Ganacsatada Soomaalida ee Suuqa Islii ee magaalada Nairobi ayaa soo dhaweeyay tilaabo ay dowladda Kenya ku doonayso sidii ay wax uga qaban lahayd dhibaatooyin dadka Kenyanka ah ay ku qabaan isticmaalka Korantada oo aad qaali u ahaa sanadihii lasoo dhaafay.
Tilaabadaan ayaa waxaa ku dhawaaqay Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo shirkadda korantada ee Qaranka (Kenya Power) ku amray inay dhinto qiimahii hore ee korantdada wadanka, taas oo ay dhibaato weyn ku heysay dadweynaha Kenya.
Dadka dhibaatada ku qabay isticmaalka korantada Kenya waxaa kamid ah Soomaalida dalkaasi, gaar ahaana ganacsatada oo siweyn u soo dhaweeyay go’aanka ay dowladda Kenya wax uga qabanayso dhibaatooyinkii ka taagnaa isticmaalka korantda Kenya.
Hadaba Cumar Ibrahim Xuseen oo ah xogyaha ganacsatada Suuqaasi ayaa sida ay u arkaan go’aanka dowladda waxaa uu uga warramay Wariyaha VOA-da ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
Gacansatada suuqa Islii oo soo dhaweeyay tallaabo ay qaaday dowladda Kenya